मुना परियोजनासँग काठमाडौं विश्वविद्यालय (कुसुम) को सहकार्य
काठमाडौं । गैरआवासीय आवासीय नेपाली संघद्दारा सञ्चालित मुना परियोजनासंग काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसुम) ले सहकार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश ३ मुना कृषि बजारको जिल्लास्तरीय स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययनका निम्ति कुसुमले सहकार्य गरेको हो । कृषि
दराजको तयारी नेपालको सबैभन्दा ठूलो सेल ११.११ कार्तिक २५ गते हुने
संसार कै सबैभन्दा ठूलो सेल, अलिबाबा को ११.११ सेल नजिकिदै छ । पहिले चीनमा मात्र सिमित उक्त सेल अहिले संसार भरि एउटा मनोरन्जनात्मक सेल डे को रुपमा चिनिन गएको छ । यो सेल अहिले अलिबाबा संग सम्बधित देशहरु तथा दराजले व्यापार गर्ने नेपाल लगायत अन्य देशहरुमा पनि हरेक वर्ष नोभेम्बर
अभिषेक सापकोटा / सामाजिक सञ्जाल आजभोलि सबैको दिनचर्या बनेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्साट्राग्राम प्रविधिका अभिन्न अंग बनेका छन् । तिनै सञ्जालमा नयाँ–नयाँ एप्स ल्याएर पश्चिमा प्रविधि कम्पनीले नाम र दाम मात्र कमाइरहेको छैन गोप्य सूचना समेत सुरक्षित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सूचना बजारमा त्यस्तै ‘फेसएप’
एजेन्सी/इन्टरनेट प्रविधिको विकासले सूचना आदान–प्रदानमा निकै सहज भएको छ । अहिले विश्व एउटा गाँउमा रुपान्तरित भएको छ । यो प्रविधि विकासको सकारात्मक पाटो भयो । तर,सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बनेका कतिपय एप्सले सामाजिक मूल्यमान्यता तहसनहसमात्र होइन अपराधजन्य गतिविधि वढाइरहेको पाइएको छ । बालबालिका मोबाइल
सकारात्मक सोचको प्रभाव सम्बन्धित एक वैज्ञानिक प्रयोग !
यो प्रयोगमा तीन वटा प्लास्टिकका टिफिन बक्समा पाकेको भात राखियो । वैज्ञानिकले सधैँ ती भातको बक्स अनुगमन गर्न प्रयोगशाला जान्थे I सो बक्सलाई एक, एक गरी हेर्दा बक्समा लेखेको शब्दहरु अनुसार भाव प्रकट गर्थे । पहिलो टिफिन बक्सको बाहिर पट्टि सकारात्मक सन्देशहरू लेखियो । जस्तै: ‘जीवन सुन्दर छ’, ‘म
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले जति तपाईलाई सन्देश आदानप्रदान गर्न सजिलो बनाएको छ, कहिलेकाही यसले दुःख पनि त्यतिकै दिन्छ । त्यो कुरा फेसबुक ह्याकरले तपाइको एकाउन्ट ह्याक गरेपछिमात्र थाहा हुन्छ । पछिल्लो समय त्यसरी ह्याक गर्ने समूह फेसबुकमा सक्रिय छ । सुरुमा तपाईको फेसबुक अकान्टबाट सन्देश पठाउने व्यक्तिको
प्रविधिमैत्री बन्दै नयाँ शक्ति
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टीलाई प्रविधिमैत्री पार्टी बनाउन जोड दिएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सूचना, सञ्चार, प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आइतबार राजधानीमा गरेको ‘सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको महत्व’
दश लाख पुगे डा.भट्टराईको ट्वीटर फलोअर्स
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईको ट्वीटर फलोअर्स दश लाख पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त रहने नेताको छवि बनाएका संयोजक डा.भट्टराईको व्यक्तिगत ट्वीटर ह्यान्डलमा सोमबार दश लाख फलोअर्स पुगेका हुन् । डा.भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा नेपालको
इन्टरनेटको विकास भारतमा !
संसार जोडन सफल प्रविधि इन्टरनेटको आविस्कार प्राचीनकालमै भएको दाबी भारतले गरेको छ । उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लवकुमार देवले यस्तो दाबी गरेका हुन् । महाभारतकालमा कौरव र पाण्डवका सेनाबीच कुरुक्षेत्रमा भएको महायुद्धको प्रसङ्ग उद्‌धृत गर्दै उनले त्यति बेला इन्टरनेट मात्रै नभई
यसरी दुरुपयोग भयो फेसबुकका ८ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताको गोप्य विवरण
काठमाडौँ । केम्ब्रिज एनालिटिका नामक एक राजनीतिक परामर्श संस्थाले ८ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताका विवरण अनधिकृत रुपमा दुरुपयोग गरेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका सिईओ मार्क जुकरबर्गले बताएका छन् । ती मध्ये ११ लाख प्रयोगकर्ता बेलायतका रहेको उनको भनाई छ । यसअघि सो संस्थाले ५ करोड प्रयोगकर्ताको विवरण दुरुपयोग
काठमाडौँ । आधुनिक प्रविधि नहुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिन महानगरीय प्रहरीलाई समस्या परेको छ । अनलाइन ठगी नेपालबाट भन्दा पनि बाहिरी देशबाट हुने हुँदा प्रहरीलाई समस्या भएको हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने गिरोह नै रहेको तर प्रहरीले ठगीको प्रमुख नाइकेलाई हालसम्म फेला
‘अन्तर्राष्ट्रिय क्वालीटी’मा नेपाली बैंकिङ, प्रयोगमै आए १५ प्रविधि
अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्रिने क्रम जारी छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् । पुराना तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूले पनि आफूलाई यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगेका छन् । पुरातन अवस्थामा ढड्डे र
बालबालिकामा इन्टरनेट प्रयोग बढेसँगै सुरक्षा खतरा
काठमाडौँ: इन्टरनेटमा बालबालिकाको सुरक्षा विषयक एक दिने सम्मेलन शनिबार राष्ट्रिय सभागृहमा शुरु भएको छ। इन्टरनेटको प्रयोगका माध्यमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, युनिसेफलगायत संघ संस्थाको आयोजनामा सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलनको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्द
डेढ करोड मोबाइल आईएमईआई दर्ता
काठमाडौं : १८ महिनाको अवधिमा डेढ करोड मोबाइलको इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको आईएमईआई दर्ता सुरु गरेको १८ महिना पुग्दा एक करोड ४१ लाखभन्दा बढी आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको जानकारी दिएको छ। मोबाइल फोनलाई व्यवस्थित एवं आपराधिक
पीओएस मेसिनको प्रयोग बढ्यो
काठमाडौं : पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) अर्थात् स्वाइप मेसिनको प्रयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। ठूलाठूला मल, होटल, एयरलाइन्स, ट्रेकिङ कम्पनीको विस्तारसँगै यस्तो मेसिनको प्रयोग ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको छ। काठमाडौंलगायत बाहिरी सहरमा बनेका ठूला मल तथा होटलले यस्ता स्वाइप मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ। विशेषगरी
पृथ्वीमा मान्छे भन्दा धेरै मोबाइल !
संयुक्त राज्य अमेरिकामा आएका ऐतिहासिक सामुिद्रक तुफानहरु र एशियामा सर्वत्र आएका बाढीहरुपश्चात जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चालले हामी सजिलै अत्यासमा पर्न सक्छौँ । यी प्रलयकारी पूर्व सुचनाहरु पश्चात पनि विश्वव्यापी तापमानलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने बृहत र तेज उर्जा रुपान्तरणको एउटा उपाय हाम्रो अगाडि
वाईफाईको सट्टा लाईफाई
चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले पूर्ण रङ इमिसिबिनेट कार्बन डटहरू ९एफ(सीडी० सिर्जना गर्न सफल भएका छन्। कुन चरणले उनीहरूलाई छिटो वायरलेस सञ्जाल च्यानल बनाउनको लागि एक कदमको नजिक ल्याएको छ, र यी प्रविधिहरू मात्र ट वर्षमा उपलब्ध हुन सक्छन्। लाइट फिडिटी लिईएफ भनिन्छ यसले रेडियो आधारित वाईफाईको तुलनामा एलईडी लाइट
अन्तरीक्ष यान निर्माता स्पेस एक्सका प्रमुख एलन मस्क प्रविधिको क्षेत्रमा भविष्यद्रष्टा मानिन्छन्। उनी वैज्ञानिक आविष्कारको दुनियाँमा नयाँनयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरिरहन्छन्। उनको यस्ता योजना व्यापारिक उद्देश्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ। भर्खरै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण प्रलय निम्तिने भविष्यवाणी
बुधबार गुगलले आफ्नो नँया स्मार्टफोन पिक्सेल २ सार्वजनिक गर्‍यो। तर त्यो स्मार्टफोनसँगै सार्वजनिक गरिएको वायरलेस इयरफोनले भने बढी चर्चा पाएको छ। यसको खास कारण हो, त्यो इयरफोनको अनुवाद क्षमता। सो इयरफोनको सहयोगमा एकअर्काको भाषा नजानेका दुई व्यक्तिले सहजै कुराकानी गर्न सक्नेछन्। ‘पिक्सेल बड्स’
बुधबार साँझ फेशबुकको डेस्कटप भर्सन डाउन हुँदा विश्वभर हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। नेपालखबरले राधाकृष्ण मैनालीको अन्तर्वार्ता बुधबार राती नौ बजेर ४५ मिनेटमा सेयर गर्न खोज्दा फेशबुकको डेस्कटप भर्सनमा समस्या देखिएको थियो। त्यसपछि लगातार एक घण्टा १५ मिनेट डेस्कटप भर्सन डाउन भएपछि राती ११ बजेबाट चलेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा दिगो विकाससम्बन्धी बहसमा ककसले भाग लेलान्? पक्कै पनि दिगो विकासका विज्ञहरु नै त्यसमा सहभागी हुनेछन्। तर यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको यस्तै एक कार्यक्रममा भने रोबोटले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएको छ। बुधबार ‘द फ्युचर अफ एभ्रिथिङ– सस्टेनेबल डेभेलपमेन्ट इन द एज अफ र्‍यापिड
दुई मृत तारा आपसमा ठोक्किएको दृश्य र तरंग आफूहरुले पहिलो पटक अवलोकन गर्न सफल भएको खगोलविद्हरुले सोमबार जनाएका छन्। आपसमा ठोक्किएर विलय हुनुअघि ती दुई मृत ताराले तीव्र गतिमा एकअर्काको फन्को मारेका थिए। यो खोज खगोल विज्ञानमा नयाँ युगको सुरुवात भएको पनि वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। ‘किलोनोभा’ नामाकरण
कुल पोष्ट : 23